पुरुषले विवाह अघि बोल्ने ७ झुट, तपाईं फस्नु त भएन ? - बडिमालिका खबर
पुरुषले विवाह अघि बोल्ने ७ झुट, तपाईं फस्नु त भएन ?
विवाह एक पवित्र बन्धन हो । विवाहसंगै पुरुष र महिला हरेक तवरबाट एक अर्काबिच भावानात्मक रुपमा नजिक हुन्छन् । विवाह सबै ब्यक्तिका लागि महत्वपुर्ण तथा निर्णायक कदम हो । विवाह अघि धेरैको आआफ्नै केहि न केहि विगत हुन्छ । जसलाई आफ्नो हुनेवाला जिवनसाथि माझ साझा गरेमा भोलि त्यसबाट समस्या उत्पन्न नहुन सक्छ । तर के तपाईलाई थाहा छ, विवाह हुनुअघि पुरुषले महिलालाई प्रभावित गर्न केहि झुटहरु बोलेका हुन्छन् । विवाह अघि केटाहरुले बोल्ने झुटहरु यस्ता छन् :
१. अहिलेसम्म मेरो कोहीसँग अफियर नै चलेको छैन : विवाह अगाडि अधिकाशं पुरुषले बोल्ने सबैभन्दा ठुलो झुट नै यहि हो । केटाहरुका चाहे जति जना गर्लफ्रेण्ड हुन्, विवाह अघि त्यसलाई नर्काने गर्दछन् ।
२. तिमी मात्र एकजोर लुगामा आऊ : मन परेको केटिलाई विवाह अघि केटाले बोल्ने अर्को झुट विवाहको कुनै तयारी नगरी आफुले लगाएको लुगामा मात्र घर आउन भन्छन् । यर्थाथमा उनीहरुले त्यसो भन्नुको पछाडि मन परेको मान्छेलाई गुमाउन नचाहानु र केटिलाई प्रभावित पार्नु नै हो ।
३. विवाह पछि म यो सब छोडिदिन्छु : अधिकाशं केटाले विवाहअघि बोल्ने अर्को झुट भनेको आफुमा रहेको कुनै खराब अम्मल अर्थात मद्यपान, धुम्रपान, सुर्ति लगायतको सेवन गर्ने बानि विवाह पछि छोड्ने बताउछन् ।
४. तिम्रो र मेरो परीवार दुबै बराबर : केटाले विवाह गर्नु अघि घर पक्ष र ससुराली पक्ष दुबै बराबर हुने बताउँछन् । दुबै तर्फको परीवारलाई समान ब्यवहार गर्ने उनिहरुको प्रतिवद्धता हुन्छ जो कालान्तरमा अधिकांश केटाहरु पुरा गर्न सक्दैनन् ।
५) तिमी संसारको सबैभन्दा राम्री छौ : हरेकलाई थाहा छ, सुन्दरताको कुनै स्पष्ट परिभाषा हुदैन । हरेक सुन्दरता हेर्ने दृष्टिमा भर पर्छ । तर विवाह अघि केटाले केटिलाई आर्कषित गर्न उनि नै संसारको सबैभन्दा राम्री भएको झुट बोल्छन् । यर्थाथ संसारमा अरुपनि धेरै राम्रा हुन्छन् ।
६) तिमी नै मेरो सबैथोक हौ : विवाहअघि केटाले केटिलाई तिमी नै मेरो सर्वश्व हौ भनेर मख्ख पार्छन् । तर विवाहको केहि समयपछि विस्तारै केटाहरु समय दिन सक्दैनौ । साथै श्रीमतीले भनेको कुरा समयमा पुरा गर्न सक्दैनन् ।
७. हरेक रुपमा तिमी मलाई सुन्दर लाग्छौ : विवाह अघि पुरुषले हुनेवाला जीवनसाथिलाई उनी हरेक रुपमा राम्री लाग्ने बताउछन् । शुरु शुरुमा श्रीमतीका हरेक कुरा मनपर्ने श्रीमानलाई पछिपछि उनको त्यहि बानि तथा पहिरनमा कमजोरी देख्न थाल्छन् ।
यी ५ कुरामा पुरुषहरुले कहिल्यै लाज मान्नु हुन्न